Fatin-kisoa Anarivony No Hita Nitsingevana Teo Amin’ny Reniranon’i Shanghai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2013 2:23 GMT
Nahangona fatin-kisoa 3,323 ny roa andro nanadiovana ny renirano Huangpu, izay manasasaka an'i Shanghai. Milaza ny haino aman-jery eo an-toerana fa avy any Jiaxing ireto kisoa ireto, any amin'ny faritanin'i Zhejiang izany izay nahitana, hatramin'ny niantombohan'ny taona, kisoa miisa 20.000 mahery maty noho ny gripan-kisoa [zh]. Nanamafy haingana ny mpitondra fanjakana fa tsy nandoto ny famatsiana rano akory izany, raha toa kosa ny vahoaka ka mbola tena mitaintaina mikasika ny loto goavana nateraky ny fahalòvan'ireo fatin-kisoa. Avy any amin'ny ony Yangtze ny reniranon'i Shanghai ary nanambara ny fanjakana fa matin'ny andro mangatsiaka ny kisoa fa tsy otrik'aretina akory. Na izany aza, maro ireo mponina amin'ny aterineto no tsy dia matoky ireo fanambarana ireo.
Nanasa [zh] ny manampahefana ny Testing Paper (验算纸) mba hanaporofo amin'ny vahoaka fa azo antoka tsara ny rano:
Nanontany tena [zh] i Liu Junluo (劉軍洛）ny amin'ny antony tsy namoahan'ny fanjakana mialoha ny antsipirihany mikasika ireo kisoa maty:
Nanampy vaovao misimisy kokoa avy any an-toerana mikasika ilay loza ny mpampiasa Weibo Changan Xianling (@长安县令):
Maro ny olona nanontany ny antony mahavitsy ny vaovao mikasika ity tranganà fatin-kisoa ity. Nibanjina [zh] ny fanjakana ho tompon'antoka amin'ity loza ity i @I Am Zuo Anlong (我是左安龙):
Nanakora ny endriky ny vaovao any Sina i Li Mingseng (李鸣生):
Manontany tena [zh] ny Brother Excellence (卓越兄) ny antony mahatonga ny tsy hisian'ny resadresaka mihitsy eo amin'ny haino aman-jery sosaily hatramin'ny nahitàna ireo fatin-kisoa teo amin'ny renirano Huangpu:
Te-hahafantatra [zh] ny marina ny mpandinika ny tontolo iainana Dong Liangjie
Nisarika ny sain'ny maro ity loza ity. Manaitra ny manam-pahefana ny tenako mba hilaza ny marina ary tokony hijery ny antontan'isan'ny fahapoizinana ara-tontolo iainana ny orinasa mpamatsy rano. Aza afenina noho ny Lianghui ny marina. Aza asetra loza ny fahamarinanao. Raha tsy mandeha amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, mety havesatra be ny hizaka ny vokatr'izany.
Soratra miverina: Nahafaty Olona Enina Ny Gripam-Borona Tany Shina · Global Voices teny Malagasy
[…] manodidina ny faritanin'i Zhejiang, Anhui ary Jiangsu, ka niteraka siosion-dresaka fa mety ho fatin-kisoa manakaiky ny 15000 hita tao amin'ny reniranon'i Shanghai [mg] tamin'ny volana lasa no nampiparitaka ny […]
09 Avrily 2013, 11:38